अर्थतन्त्र सकारात्मक हो र ?
नेपालको शेयरबजार नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीहरूमा बैंकहरूको संख्या अत्यधिक छ । कारोबार संख्या र रकम पनि बैंककै बढी देखिन्छ । अहिले बैंकहरूले गतवर्षभन्दा बढी मुनाफा कमाएका छन् । बोनस दिने घोषणा गरेका बैंकहरूले गतवर्षभन्दा बढी बोनस पनि दिएका छन् । तर पनि बजार उकालो लाग्न सकेको छैन । कतिपयका विचारमा भने विगतमा बजार अस्वाभाविक ढंगले उक्लिएको थियो । अहिलेचाहिँ स्वाभाविक आकारमा आएको हो भन्ने उनीहरूको भनाइ छ । जजसको जे भनाइ भए पनि हामी लगानीकर्ता घाटामा छौं । कम्पनीहरू बिग्रिएर हामी घाटा गएको भए त्यो स्वाभाविक हुन्थ्यो । तर, अहिले नाफा बढाए पनि बजार भने उक्लन सकेको छैन ।
हुन त धेरैले शेयरबजारलाई हल्लाको बजार भन्ने गर्छन् । बजारमा सक्रिय लगानीकर्ता हल्लाको भरमा चल्ने खालका मात्र छैनन् । कम्पनीको नाफा, सञ्चालकहरूको अवस्था, कम्पनीहरूले प्राप्त गरेको सफलता र लिएको रणनीतिसमेत हेरेर लगानी गर्नेहरूको संख्या ठूलो छ । साँच्चै भन्ने हो भने त्यस्ता लगानीकर्ताकै बाहुल्य छ । अहिले बजारको खलनायकका रूपमा धेरैले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई हेरेका छन् । उनले दिएका केही प्रतिक्रिया र व्यवहारले त्यस्तै संकेत गरे पनि मूल कारण भने त्यतिमात्र होइन जस्तो देखिन्छ । खासमा उनले बजारलाई प्रोत्साहित गर्न नखोजेको भने पक्कै हो । अर्थमन्त्रीले शेयरबजारलाई अनुत्पादक भने । बजार घट्नै नहुने हो र भन्ने प्रतिक्रिया पनि दिए । यस्तो प्रतिक्रिया आएकै दिन बजार घटेको थियो । नयाँ सरकारको समृद्धिको उद्घोषले लगानीकर्तालाई उत्साहित बनाए पनि बजार ओरालो लागेका बेलामा सरकार उल्टै गैरजिम्मेवार रहेको हामी लगानीकर्तालाई भएको छ । हुन त सरकारले शेयरबजार बढाइ दिने होइन । तर, बजारका समस्या समाधान गर्नभन्दा विभिन्न नाममा समस्या थप्न सरकार सक्रिय र≈यो । त्यही भएर अर्थमन्त्रीलाई शेयर बजारले खलनायक देखेको हो ।
शेयरबजारमा धनीहरू मात्र नभएर साना साना शेयरवाला पनि छन् भन्नेमा सरकारको ध्यान गएन । करको किचलो, भारित औसत गणना विधि जस्ता अनेक समस्या थपेर लगानीकर्तालाई अत्याइयो । त्यही कारण शेयरबजार ओरालो लाग्यो । अहिले आएर बल्ल ब्रोकरलाई समेत मार्जिन कारोबार दिन थालिएको छ । सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्ड बनाउन कुनै काम भएको छैन । मार्केट मेकर र धितोपत्र व्यापारीको अनुपस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने भनिए पनि त्यसतर्पm ठोस काम भएको छैन । यसलाई सम्बोधन नगरे शेयरबजारमा कुनै न कुनै तरीकाले असर पारिरहन्छ । के लाखौं लगानीकर्ता डुबेको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशातिर गएको छ भन्ने दाबी सही होला त ?
अमित खड्का, कपन, काठमाडौं